Goodvibes: fampiharana tsara handrenesana feo avy amin'ny Internet | Avy amin'ny Linux
Azo antoka rehefa mila mpampiasa mandany (mijery / mihaino) atiny multimedia amin'ny Internet, na inona na inona karazana Operating System manana, izany hoe, raha fananana, mihidy ary mivarotra na maimaim-poana, misokatra sy maimaim-poana, azo inoana fa manokatra ny tranokala tianao indrindra ianao ary mifandray amin'ny tranokala nofidinao hiditra ao.
Na izany aza, ny fampiharana amin'ny birao, na ho an'ny fampidinana na hijerena ireo atiny voalaza ireo, hialana amin'ny fampiasana ny Web browser, izay mazàna mandany loharano betsaka, toy ny CPU, RAM ary fantsom-pifandraisana. Ary anisan'ireo fampiharana efa misy, iray amin'izany ny Goodvibe, izay fampiharana tsotra sy maivana ho an'ny GNU / Linux ahafahantsika mihaino feo avy amin'ny Internet mora, na amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny streaming, ohatra amin'ny radio, ary ivelan'ny Internet toy ny podcast efa voarakitra.
Tsara ny manamarika fa vao haingana koa isika no naneho hevitra momba ny iray hafa fampiharana tsotra sy maivana mifandraika amin'ny fitantanana audio sy podcastantsoina hoe Audio Recorder, izay amporisihanay anao hamaky raha tsy afaka nanao izany ianao tamin'izany fotoana izany, amin'ny alàlan'ny fanindriana ny rohy manaraka etsy ambany:
"Audio Recorder no ufandaharana mahafinaritra amin'ny fandraisam-peo (feo) amin'ny solosaina. Ity fitaovana ity dia ahafahan'ny mpampiasa manoratra raki-peo avy amin'ny fitaovana toy ny mikrô, webcam, karatra feo, ary koa avy amin'ny rindranasa toa ny haino aman-jery multimedia na ny mpizaha Internet, sns.".
1 Goodvibe: Internet Radio Player
1.1 Inona ny atao hoe Goodvibe?
Goodvibe: Internet Radio Player
Inona ny atao hoe Goodvibe?
Mitanisa ny azy tranokala ofisialy, nofariparitan'ny mpamorona azy fohy toy izao:
Amin'izao fotoana izao, ny kinova farany farany misy dia ny laharana 0.6, izay azo sintonina mivantana amin'ny fampiasana azy Mandehana, araka ny asehon'ny tranonkalanao ao amin'ny fizarana fametrahana. Izy io koa dia azo apetraka mivantana avy amin'ny trano firaketana ny ankamaroan'ny GNU / Distros Linux, toa ny ahy Distro MX Linux, mankasitraka fa ny misy dia ny kinova laharana 0.4.2.
Toy izany koa, nametraka azy tamin'ny baiko tsotra eto ambany aho: «sudo apt install goodvibes». Na izany aza, raha mila fanazavana fanampiny, azonao atao ny mitsidika ny tranokala ofisialiny ao GitLab y GitHub.
Araka ny hitanao eo amin'ny sary eo ambony, ny interface indrindra dia minimalist na madio, manana bara ambony misy fizarana 2 izy:
Amin'ity fizarana voalohany ity dia ho hitanao ireto safidy manaraka ireto:
Manampia gara: Mba hanampiana ny anarana sy ny URI (adiresy tranonkala) an'ny loharanom-peo an-tserasera, na streaming na rakitra audio mihetsiketsika na mavitrika izany.
safidinao: Ny fampisehoana varavarankely misy safidy 3 hafa, antsoina hoe Misc, Display ary Controll, ankoatry ny zavatra hafa, mitantana ny fanaovana kopia sy ny fifampiraharahana amin'ny D-Bus, tantano ny fifandraisana miaraka amin'ny interface graphique sy ny endriny hita maso, ary tantano ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny Hoykeys amin'ny klavier.
Hidio GUI: Manidy (manafina) ny interface interface an-tsary tsy manakatona ny onjam-peo mandeha.
fivoahana: Fanidiana tanteraka ny fampiharana.
Amin'ity fizarana faharoa ity dia hahita ireto safidy manaraka ireto ianao:
Fanampiana an-tserasera: Mba hanokafana ny tranonkala ofisialy amin'ny GitLab hahafahan'ny mpampiasa miditra mora foana ny antontan-taratasy fangatahana.
about: Mba hampisehoana ny varavarankely fampahalalana, aseho amin'ny sary eo ambony eo ihany.
Ao amin'ny varavarankely preferences, amin'ny fomba antsipiriany kokoa, ity manaraka ity dia azo tantanana:
Fanohanana fanalahidy multimedia: lakile , SY izay hita amin'ny ankamaroan'ny fitendry.
Fampandrenesana: Fampahalalana miseho rehefa miova ilay hira.
Ny safidy tsy hampiatoana: Mba hisorohana ny fampiatoana ny rafitra rehefa mandeha ny radio.
Fampiasana Autoplay: Manomboka milalao ny radio farany rehefa manomboka ny fampiharana.
Fanohanana MPRIS2: Ho fampidirana tsara kokoa amin'ny solosaina maoderina.
Ankoatr'izay, ny developer lazao izao manaraka izao:
"Ho anao izay miaina anaty terminal indrindra ary misoroka ny interface amin'ny mpampiasa sary, tokony ho fantatrao fa afaka manangana Goodvibe ianao raha tsy misy GUI, ary mifehy azy amin'ny alàlan'ny mpanjifa misy ny baiko omena".
Izaho manokana dia nanandrana maromaro radio an-tserasera, ary tsara daholo. Fa ny tena tiako indrindra dia ny fahazoana mandray an-tsoratra ilay URL Podcast fa nofidiko ho porofo. Tsy ny tranonkala rehetra no manolotra a URI na URL mivantana handany ny stream audio dinamika na static a radio na podcast voarakitra, Ka ny fika (hack) ity no nampiasaiko, raha tsy mahazo URI na URL mivantana aho:
"Mampiasà plugin fampidinana toa ny Video DownloadHelper aho, hanombohana ny fampidinana ny rakitra audio izay misy ny onjam-peo mavitrika na tsy miovaova, avy eo alaliniko ny rohy fampidinana azy ary ajanoko ny fisintomana, ary miditra ao amin'ny URI ihany aho. Ka afaka mihaino ny Podcast-ko sy ny radio sasany avy ao amin'ny Goodvibe".
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Goodvibes», izay fampiharana tsotra sy maivana ho an'ny GNU / Linux mamela antsika hihaino mora foana ny audio avy amin'ny Internet, na amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny streaming, ohatra, radio, ary koa ivelan'ny Internet toy ny podcast efa voarakitra; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Goodvibe: fampiharana tsara handrenesana feo avy amin'ny Internet
Ankasitrahana ireo lahatsoratra toa an'io. Mba hihainoana ny onjam-peo amin'ny Internet dia nampiasa ilay fampiharana Pyradio tena maivana aho, izay zara raha mandany loharano. Saingy noho ny antony tsy vitako ny nametraka azy tamin'ny MX Linux (tsy maintsy misy ifandraisany amin'ny Pip). Mahagaga fa vitako ny nametraka azy tao amin'ny BunsenLabs, miorina amin'ny Debian Buster ihany koa.